Mabhero earamu mukuvandudza kwekutaurirana | Kudzidziswa Kwekuziva
Ndeapi mamiriro ezvinhu mune zvinopfuura zvakafanira kubata nyanzvi? Heano zvimwe zviratidzo zvakakamurwa nezera reboka:
6 mwedzi Haaseki kana kushevedzera; haina kutarisa kudivi redzidziso nyowani
9 mwedzi Kwete kana kushoma kutaura. hairatidzi mufaro kana kutsamwa
12 mwedzi Izvo hazviratidze zvinhu; haaite manyemwe sekuzunza musoro
15 mwedzi Haasati ataura izwi rekutanga futi; haapindure "kwete" kana "hello"
18 mwedzi Haashandise angangoita 6-10 mazwi zvakaringana; hainzwe kana kusarura ruzha zvakanaka
20 mwedzi Haana kuwanda kweanosvika matanhatu makonzonendi; haite mirau yakapusa
24 mwedzi Ane mazwi asingasviki makumi mashanu emazwi; haana hanya nekudyidzana kwevanhu
36 mwedzi Vatorwa vanotambura kuti vanzwisise zvaanotaura; haishandisi mitsara yakapfava
Dzimwe mamiriro ekuchengetedza pasi pekutarisa:
kusarudza chikafu (idya chete 4-5 chikafu)
hapana kufarira kutaurirana
kunyanyisa mate kurasikirwa
kundandama kweinopfuura mwedzi mitanhatu.
mabhero e alarm, mutauro, matambudziko ekutaurirana, matambudziko ekutaura, kukura kwechisimba
Iwo maaramu mabhero mukuvandudza kwekutaurirana2020-11-052020-12-28http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/11/red-35853_1280.png200px200px